Xagee Ayeey Marayaan Wadahadaladii U Dhaxeeyay Barcelona Iyo Eric Garcia.
Home Wararka Ciyaaraha Maanta Xagee ayeey marayaan wadahadaladii u dhaxeeyay barcelona iyo Eric Garcia.
Barcelona ayaa ku mashquulsan sidii ay u sugi laheyd saxiixyo cusub xilli ciyaareedka soo socda, xidiga ugu horeeyana waxaa uu noqon karaa daafaca kooxda Manchester City Eric Garcia.
Daafaca dhexe ee da’da yar ayaa ogolaaday heshiis maamule ah inuu dib ugu laabto Catalonia sanadkii hore, laakiin in kasta oo Barcelona ay wali aad u daneyneyso isaga, waxay u soo bandhigeen xirmo mushahar ka yar wixii la dejiyay 12 bilood ka hor.
Mateu Alemany wuxuu hadda la wareegay agaasimaha isboortiga wuxuuna bilaabay inuu go’aanno gaaro Midkood wuxuu ahaa inuu siiyo iftiinka cagaaran saxiixa Garcia, oo ah ciyaaryahan aad ugu dhawaa inuu u saxiixo Barcelona labadii daaqadood ee ugu dambeysay.
Haatan, si kastaba ha noqotee, Barcelona waxay raadineysaa inay yareyso soo jeedintaas bilowga ah, sababtoo ah xaalada dhaqaale ee kooxda oo ka sii dartay COVID-19 iyo tilaabooyinka xiga ee la soo rogay.
Haatan waa la arki doonaa haddii ciyaaryahanka, oo had iyo jeer jeclaan lahaa inuu ku laabto Barcelona, uu aqbali doono soo jeedinta.
Previous articleTotonham oo premier league kusii heyneysa Aguero kaas oo ah mid xor ah.
Next articleManchester united oo qiimo culus duldhigtay xidiga amaahda ku jooga west ham Lingard.